Search အမေရိကန် လိာ`.8` 8`+8`. - GenFK.com
အမေရိကန် လိာ`.8` 8`+8`.
ကမ္ဘာပေါ်က ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုတွေကို ဂြိုလ်တု Satellite နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ………. ပိုမိုဆိုးရွားဖို့ဖြစ်လာမှာလား ၊ ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိတိုင်းအတွက် ချိန်းခြောက်မှုဖြစ်လာမှာလား ………. ဆိုတာတွေကို အမေရိကန် သိပ္ပံအက်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Geostorm ကို အမေရိကန်ဒါရိုက်တာ Dean Devlin က ရိုက်ကူးထား တာဖြစ်ပါတယ်။ Independence Day လို သိပ္ပံဇာတ်ကားကောင်းမျိုး ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ယခု Geostorm မှာကော ဘယ်လို ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ တင်ဆက်မယ်ဆိုတာကို Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ IMDb website ရဲ့ 5.8 အဆင့်သက်မှတ်ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ #Big9 #Entertainment
31 Oct 2017 · 6.3K views
စီးပွါးရေးကပ်ဘေး ( Recession ) နှင့် လက်သကမ်းအလို အမေရိကန်
✅ Bureau of Economic Analysis ( BEA ) ရဲ့ အခကျြအလကျစုဆောငျးခကျြ တှကေိုကွညျ့ရငျ July 13 ရကျမနကျ 8:30 am မှာ ထုတျပွနျမညျ့အမရေိကရဲ့ Q2 GDP အခွအေနေ မကောငျးနှိငျတဲ့အတှကျ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူတှဟော စီးပှါးရေးကပျဘေး အတှကျစိုးရိနျမူတှေ မွငျ့တကျနပွေီဆိုတာ လကျရှိ Stock စြေးကှကျ ကဆြငျးနမေူ အခွအေနကေိုကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျးလို့ရနပေါပွီ။ ✅အမရေိကနျနှိငျငံရဲ့Q1 GDP ဟာ ရလဒျ မကောငျးခဲ့ပါဘူး .. နောကျထပျ Q2 GDP ရလဒျပွနျလညျမကောငျးခဲ့ပါက စီးပှါးရေးကပျဘေး ကို တရားဝငျ ရငျဆိုငျနရေပွီလို့ သတျမှတျလို့ရနပေါပွီ ✅လကျရှိ ငှကွေေးဖောငျးပှမူ နှငျ့ အလုပျအကိုငျ (layoff) အခွအေနအေကွောငျးရငျး ✅လကျရှိ Stock စြေးကှကျအနအေထားမှာ long term investment တှဖွေဈတဲ့ 401k , Roth IRA ကိုထုပျရောငျးသငျ့သလား ? 👉Here’s YouTube link 👉 https://youtu.be/Zhfh2T_Fd8Q
13 Jun · 30K views
သ ခ င့် ဆီ အပြေးပြ န် လာ မ ည် (တေး Album) 1. သခင့်ဆီအပြေးပြန်လာမည် 2. သိပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့နွဲ့တင်ရယ် 3. နှုတ်ဆက်ခြင်း 4. စိတ်ညှို့ရှင် 5. ငါ့ဘဝ 6. ဂျိန်းဖောသူ 7. မင်းဝမ်းသာတော့ 8. ငိုနေလို့တော့အပိုပဲ 9. မေတ္တာရေစုန်မျှောခဲ့သူ 10. ရေလိုက်ငါးလိုက် 11. လျှော့ကြိုးကုန်ချိန် 12. ပါရမီဖြည့်ဖက်
စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးတေးများ
22 Sep 2018 · 77K views